‘केपी ओली आफ्ना माग राखेर अनसन बसे हुन्छ, कांग्रेस सधै सत्याग्रहीको पक्षमा छ’ – Samaj Khabar
संबाददाता : Samaj Khabar प्रकाशित मिति: २ श्रावण २०७५, बुधबार ०७:३६
नेपाली कांग्रेसले सरकारविरुद्ध सडक संघर्षको घोषणा गरेको छ । यस्तो अवस्थामा सडकमा कांग्रेसको उपस्थिति बढाउन नेपाल विद्यार्थी संघको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । नेपाल विद्यार्थी संघ आन्तरिक किचलोमा फसेको अवस्थामा कांग्रेस कसरी सशक्त संघर्षमा उत्रन सक्ला ? यस विषयमा नेपाल विद्यार्थी संघका केन्द्रीय सदस्य रघुवीर कार्कीसंग गरिएको छोटो कुराकानी–
कांग्रेसले सडक आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । नेविसंघ के गर्दैछ ?
हामी शैक्षिक एवं राजनीतिक एजेण्डाका सन्दर्भमा सधै आन्दोलित छौं । पार्टीले निर्णय गरिसकेपछि नेविसंघले अब सडक संघर्षलाई सशक्त बनाउँछ र कम्युनिष्ट सर्वसत्तावादलाई घुँडा टेकाएर छाड्छ । अहिले पनि नियमित रुपमा नेविसंघले डा.गोविन्द केसीको माग पूरा गराउन, शैक्षिक शुल्कवृद्धि फिर्ता लिन तथा सरकारका गलत कारवाहीको विरुद्धमा आन्दोलन गरेकै छ । यो अझ सशक्त हुन्छ ।
नेविसंघ आफू विवादको भूमरीमा छ कसरी सशक्त संघर्ष गर्ला र ?
नेविसंघभित्र फरक मत छ र त्यसले संगठनभित्र विवादको रुप लिएको छ । नेविसंघमा विवादै छैन भनेर छोप्नुपर्ने अवस्था छैन । तर विवाद संगठनका सवालमा हो, संघर्षका सवालमा होइन । सांगठनिक एकता कायम गर्नपनि विभिन्न प्रयास भइरहेकै छ । सर्वसत्तावादको मुकाबिला गर्ने विषयमा नेविसंघमा विवाद छैन । हामी सडकमा उत्रेपछि शासकको होस उड्छ ।
पार्टीको निर्देशन त मान्नुहोला तर डा. केसीको मागलाई कांग्रेसले राजनीतिक हतियार मात्रै बनाएको न हो ?
कांग्रेसले डा. गोविन्द केसीको सत्याग्रहलाई गलत उपयोग गर्दैन । हामी केसीको मात्रै होइन संसारका सबै सत्याग्रहीको सम्मान गर्ने लोकतन्त्रवादी हौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीकै केही माग छन् र सत्याग्रह गर्नुहुन्छ भनेपनि हामी सम्मान गर्छौ । तर चिकित्सा शिक्षा सुधारको पवित्र मागका लागि डा. केसीले थालेको अभियानलाई यो वा त्यो बाहनामा कमजोर बनाउन हामी दिन्नौं । आज कसैले डा. केसीलाई गलत भन्छ भने कि त्यो ओली सरकारको मन्त्री हो कि त माफिया वा उसको सहयोगी हो । कांग्रेस स्वास्थ्य शिक्षा सुधारका लागि केसीको पक्षमा उभिएको हो र यो अभियानमा नेविसंघ संगसंगै छ ।
नेविसंघको विवाद र समानान्तर गतिविधिले पार्टीलाई हानि गर्दैन ?
कम्युनिष्ट पार्टीका कार्यकर्ताजस्तो गोडाफाँट सतर्क गर्ने हामी नेविसंघ होइनौं । हामीभित्र फरक मत र बहुल विचारलाई स्थान छ । त्यसैले गर्दा कहिलेकाही विवाद उग्र बनेको देखिन्छ । अहिले नेविसंघको नेतृत्वबारे जतिपनि कुरा आएका छन् त्यसलाई वैधानिक रुपमा समाधान गर्न सकिन्छ । हामी संगठनभित्र विवाद बढाउने दुवैतर्फका अतिवादको पक्षमा छैनौं । हामी समानान्तर संगठन होइन सक्रिय संगठन गर्नुपर्छ भन्दछौं । त्यसैले नेविसंघभित्रको समस्या समाधानका लागि सार्थ प्रयास सबै पक्षले गर्नुपर्छ । तोकिएकै समयमा महाधिवेशन गरेर नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्छ ।
२ श्रावण २०७५, बुधबार ०७:३६ मा प्रकाशित